နန်းဆိုင်နွမ်| February 21, 2013 | Hits:14,399
မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 22, 2013 - 3:22 am ဒေသခံတွေလဲ ၀ိုင်းကူ ပါဝင်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပုဂံနဲ့ အနီးတ၀ိုက်မှာ တိုးရစ်စ်တွေ ဘုရားဖူးတွေ အခြေခံပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူတွေ များပါတယ်။ ဧည့်သည် အလာနည်းရင် ဒေသခံ စီးပွားရေးလဲ ကျမှာပါ။ ၁၉၈၀ ၀န်းကျင်ခေတ်တွေက တိုးရစ်စ်တွေ ညဘက်မှာလဲ အန္တရာယ်ကင်းစွာ လျှောက်သွားနေလို့ ရလို့ သဘောကျ ကြတယ် ပြောပါတယ်။ သူတို့ ခရီးသွား လမ်းညွှန်စာအုပ်တွေမှာ ပုဂံကို အဲသလို လုယက်မှုတွေ ကြောင့် မသွားသင့်ဘူး ရေးရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းပဲ နစ်နာပါမယ်။ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါ။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်ကို လုယက်ရင် အပြစ်ဒဏ်ကို ပိုတိုးချသင့်ပါတယ်။
Reply Shwe Hninsi February 22, 2013 - 10:54 am Growing up thieves in the family of Ne Win and Than Shwe, policemen themselves are thieves. They may have connection with local thieves. Who know?